डेनजेल वाशिंगटनबाट सर्वश्रेष्ठ उद्धरणहरू - Victor Mochere
Denzel Hayes Washington Jr. एक अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक, र निर्माता हो। स्क्रिन र स्टेजमा आफ्नो प्रदर्शनका लागि परिचित, उहाँलाई "क्लासिक चलचित्र स्टारडमको अवधारणा" पुन: कन्फिगर गर्ने अभिनेताको रूपमा वर्णन गरिएको छ। आफ्नो करियरको दौडान, वाशिंगटनले टोनी अवार्ड, दुई एकेडेमी अवार्ड र तीन गोल्डेन ग्लोब अवार्डहरू सहित धेरै प्रशंसाहरू प्राप्त गरेका छन्। 2016 मा, उहाँले Cecil B. DeMille लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो, र 2020 मा, न्यूयोर्क टाइम्सले उहाँलाई 21 औं शताब्दीको महान् अभिनेता घोषित गर्नुभयो।
वाशिंगटनले थिएटरमा आफ्नो अभिनय करियर सुरु गरे, 1979 मा विलियम शेक्सपियरको कोरियोलानस सहित, ब्रॉडवे बाहिर प्रदर्शनहरूमा अभिनय गर्दै। उनी पहिलो पटक मेडिकल ड्रामा सेन्ट एल्सवेयर (1982-1988) बाट प्रसिद्धिमा आए। वाशिंगटनको प्रारम्भिक फिल्म भूमिकाहरूमा नर्मन जेविसनको ए सोल्जर स्टोरी (1984) र रिचर्ड एटेनबरोको क्राइ फ्रीडम (1987) समावेश थियो। सिविल वार ड्रामा ग्लोरी (1989) मा निजी सिलास ट्रिपको भूमिकाको लागि, उनले सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताको लागि आफ्नो पहिलो एकेडेमी पुरस्कार जितेका थिए।
1990 को दशकमा, उनले स्पाइक लीको जीवनी चलचित्र महाकाव्य माल्कम एक्स (1992), केनेथ ब्रानाघको शेक्सपियरको रूपान्तरण मच एडो अबाउट नथिंग (1993), एलन जे. पाकुलाको कानूनी थ्रिलर (1993) जस्ता विविध चलचित्रहरूमा एक अग्रणी व्यक्तिको रूपमा स्थापित गरे। ), जोनाथन डेम्मेको नाटक फिलाडेल्फिया (1993), र नर्मन जेविसनको कानूनी नाटक द हरिकेन (1999)। वाशिंगटनले क्राइम थ्रिलर ट्रेनिङ डे (२००१) मा भ्रष्ट जासूस अलोन्जो ह्यारिसको भूमिकाका लागि उत्कृष्ट अभिनेताको लागि एकेडेमी अवार्ड जित्यो।
वाशिंगटनले रिमेम्बर द टाइटन्स (2000) मा फुटबल प्रशिक्षक हर्मन बून, द ग्रेट डिबेटर्स (2007) मा कवि र शिक्षाविद् मेल्विन बी टोल्सन, अमेरिकन ग्याङ्स्टर (2007) मा ड्रग किंगपिन फ्रान्क लुकास र एक एयरलाइन जस्ता विविध भूमिकाहरूमा अभिनय जारी राखेको छ। उडान (2012) मा लत संग पायलट। उनले 2010 मा अगस्ट विल्सन प्ले फेन्सको ब्रोडवे पुनरुत्थानमा उनको अभिनयको लागि एक प्लेमा सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको लागि टोनी पुरस्कार जित्यो।
वाशिंगटनले पछि निर्देशन, निर्माण, र 2016 मा फिल्म अनुकूलनमा अभिनय गरे, जुन वाशिंगटनका लागि उत्कृष्ट चित्र र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित चार एकेडेमी पुरस्कारका लागि मनोनीत भएको थियो। उनले विल्सनको मा रेनीको ब्ल्याक बटम (२०२०) को फिल्म रूपान्तरण पनि बनाए। उनी 2020 मा लोरेन ह्यान्सबेरीको A Raisin in the Sun को ब्रोडवे रिभाइभल्स र 2014 मा Eugene O'Neill को The Iceman Cometh मा पनि देखा परेका छन्। वाशिंगटन पाँच अलग-अलग दशकहरूमा अभिनयको लागि एकेडेमी अवार्डका लागि मनोनीत हुने पाँच अभिनेता मध्ये एक हुन्। ।
डेनजेल वाशिंगटनका केहि उत्कृष्ट उद्धरणहरू तल सूचीबद्ध छन्।
"एकजना मानिसले मलाई भने कि तपाईं बिहान आफ्नो ढोकाबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ, र तपाईं पहिले नै समस्यामा हुनुहुन्छ। एउटै प्रश्न यो हो कि तपाईं त्यो समस्याको शीर्षमा हुनुहुन्छ कि छैन?" - डेन्जेल वाशिंगटन
"एक बुद्धिमान महिलाले आफ्नो पुरुषमा जीवन बोल्नुको महत्त्व जान्दछन्। यदि तपाईं उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्, उहाँलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्, र उहाँको शान्ति बन्नुहोस्।” - डेन्जेल वाशिंगटन
"अभिनय भनेको जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र हो, परिवार नै जीवन हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"अभिनय, यो मेरो जीवन होइन, मेरो बच्चा र मेरो परिवार हो, यो जीवन हो। म हरेक बिहान उठ्छु, ईश्वर चाहान्छु, त्यसको लागि।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"र चलचित्रहरूको बारेमा अचम्मको कुरा यो हो कि एक पटक तिनीहरूले काम गरेपछि, तिनीहरू मानिसहरूको हो। एकचोटि तपाईंले यसलाई बनाउनु भएपछि, तिनीहरूले के देख्छन्। मेरो टाउको त्यहीँ छ ।” - डेन्जेल वाशिंगटन
"शेक्सपियर जस्ता सामग्रीको कुनै पनि राम्रो टुक्रा पुन: व्याख्याको लागि खुला हुनुपर्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"दिनको अन्त्यमा, यो तपाईंसँग के छ वा तपाईंले हासिल गर्नुभएको कुराको बारेमा होइन। तपाईंले ती उपलब्धिहरूसँग के गर्नुभयो भन्ने कुरा हो। यो तपाईले कसलाई माथि उठाउनुभयो, कसलाई राम्रो बनाउनुभयो भन्ने बारे हो। यो तपाईले फिर्ता दिनुभएको बारे हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तिमीले के माग्नुहुन्छ होशियार रहनुहोस् किनभने जब तपाइँ वर्षाको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईले हिलोसँग पनि सामना गर्नु पर्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईले के गरिरहनु भएको छ तपाई आफैं भन्दा ठूलो छ, र तपाईले अपूरणीय शान्ति पाउनुहुनेछ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"कालो वा सेतो राम्रो भागहरू आउन गाह्रो छ। राम्रो अवसरको साथ एक राम्रो अभिनेता एक शट छ; अवसर बिना यो फरक पर्दैन कि तपाईं कति राम्रो हुनुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईले के गर्नु पर्छ गर ताकि तपाई जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जीवित बनाउनको लागि चाहना नगर्नुहोस्, फरक पार्ने इच्छा राख्नुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"ठूलो सपना देख्न, ठूलो असफल हुन नडराउनुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मलाई सबै भावुक नगर्नुहोस्, मलाई म मर्छु भनेर सोच्न लगाउनुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जिविका बनाउन मात्र होइन, फरक पार्ने आकांक्षा।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मेरो बारेमा के भनियो मलाई नभन्नुहोस्। मलाई भन्नुहोस् किन तिनीहरू तपाईंलाई यो भन्न धेरै सहज थिए?" - डेन्जेल वाशिंगटन
"सपनाहरू महान छन्। वास्तवमा, जीवनमा सपनाहरू आवश्यक छ नत्र कोही कतै जाँदैन! तर लक्ष्य बिनाको सपना र कार्य बिनाको सपना साकार हुने कुनै अवसर छैन। - डेन्जेल वाशिंगटन
"लक्ष्य बिनाको सपना सपना नै रहन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"लक्ष्य बिना सपनाहरू, केवल सपनाहरू हुन् र तिनीहरूले अन्ततः निराशालाई इन्धन दिन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"हरेक दिन, ईमानदारीपूर्वक र फोन बिना, तपाईसँग काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने र प्रशंसा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुहोस्, आफ्नो काम राम्ररी सिक्नुहोस्, तर सधैं सम्झनुहोस् कि तपाईंले काम गर्ने मानिसहरू तपाईंको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति हुन्। तिनीहरूलाई अँगालो। तिनीहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्। ” - डेन्जेल वाशिंगटन
"हरेक असफल प्रयोग सफलताको एक कदम नजिक छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“सबैले गर्नुपर्ने काम छ। इराकमा यस युद्धको दुवै पक्षमा मानिसहरू छन् जसले धार्मिक कारणहरूले गर्दा के गर्छन्, र तिनीहरूले आफ्नो पक्षमा परमेश्वरको साथ महसुस गर्छन्। कतिपय मानिसहरू मानिसहरूलाई नष्ट गर्नमा राम्रो हुन्छन्। सायद यो उनीहरुको उपहार हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"विश्वास भनेको आत्मविश्वास, आश्वासन, लागू गर्ने सत्य, ज्ञान हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"विश्वासले तपाईंलाई एउटा बिन्दुमा पुर्‍याउनेछ। भाग्यले तपाईंलाई एक बिन्दुमा पुर्‍याउनेछ। तर तपाईले सपना देखेको प्रकारको सफलता हासिल गर्न तपाईले काम गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ कुनै सर्टकटहरू छैनन्, तपाईंले जीवनलाई धोका दिन सक्नुहुन्न, केवल काममा जानुहोस् र तपाईं आफ्नो उच्चतम क्षमतामा नपुगेसम्म नरोक्नुहोस्। - डेन्जेल वाशिंगटन
"अगाडि लड्नुहोस्!" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईले के गरिरहनु भएको छ, र आलोचकहरूमा होइन। आलोचकहरूले कहिल्यै इतिहास बनाउँदैनन्, र आलोचकहरूले कहिल्यै कसैको जीवन राम्रो बनाउन सकेनन्। तपाईंको आफ्नै अद्वितीय विशेष तरिकामा मूल्य थप्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। - डेन्जेल वाशिंगटन
"मेरो लागि, आन्तरिक शान्तिमा सफलता। त्यो मेरो लागि राम्रो दिन हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"अरू मानिसहरूको विचारलाई तिनीहरूको सही महत्त्व दिनुहोस्। यदि यो रचनात्मक छ भने सल्लाह लिनुहोस्, र त्यसबाट सिक्नुहोस्। तर आफ्नो जीवन अरूको विचारमा आधारित नगर्नुहोस्। - डेन्जेल वाशिंगटन
"अन्य मानिसहरूको विचारलाई उनीहरूको सही महत्त्व दिनुहोस्। यदि यो रचनात्मक छ भने सल्लाह लिनुहोस्, र त्यसबाट सिक्नुहोस्। तर आफ्नो जीवन अरूको विचारमा आधारित नगर्नुहोस्। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् र आफ्नो छनौटहरूमा विश्वास गर्नुहोस्। ” - डेन्जेल वाशिंगटन
"अनुशासन र निरन्तरता बिना उपलब्धिको बाटोमा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यस संसारमा तिमी जो हौ, त्यही बन्नु पर्छ, जे भए पनि।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"ठूलो भएपछि मैले चलचित्र हेरेन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"म वास्तवमा कुनै पनि सेलिब्रेटीहरूसँग ह्याङ्ग आउट गर्दिन। मेरो सबैभन्दा नजिकका साथीहरू पुराना साथीहरू हुन्। र मेरो वास्तविक नजिकका साथीहरू, तिनीहरूमध्ये कोही पनि अभिनेता होइनन्। - डेन्जेल वाशिंगटन
“मलाई अवार्डको चिन्ता छैन। म पार्टीमा पर्याप्त समय गएको थिएँ यो जान्नको लागि कि यसले वास्तवमै फरक पर्दैन। ” - डेन्जेल वाशिंगटन
“म दबाब महसुस गर्दिन, किनकि म जे गर्न चाहन्छु त्यही गर्छु। म पटक्कै दबाब महसुस गर्दिन। मैले कहिल्यै कुनै चलचित्र गरिन किनकी मलाई लाग्थ्यो कि कसैले मलाई यो गर्न चाहन्छ। म अलि बढी छु, राम्रो शब्दको अभावमा, त्यो भन्दा स्वार्थी। तर मैले चलचित्रमा भनेझैं, तपाईंले जे गर्नुपर्छ, त्यही गर्नुहोस् ताकि तपाईंले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ।” - डेन्जेल वाशिंगटन
"मैले फेला पारेको छु कि जीवनमा कुनै पनि कुरा सार्थक छैन जबसम्म तपाईले जोखिम लिनु हुन्न।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“मैले सुरुदेखि नै धेरै सफलता पाएँ। म वास्तवमा लामो समयको लागि कहिल्यै परीक्षण गरिएको थिएन। कलेजमा सिनियर हुँदा मैले मेरो पहिलो व्यावसायिक जागिर पाएँ। मैले स्नातक हुनु अघि विलियम मोरिस एजेन्सीसँग हस्ताक्षर गरें। - डेन्जेल वाशिंगटन
“म २० वर्षदेखि बेरोजगार भएको छैन। म नियमको अपवाद हुँ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"म पात्रमा इमान्दार र सच्चा भएर भूमिका खेल्ने प्रयास गर्छु।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मलाई कुरा गर्न मन पर्छ। मलाई अभिनय मन पर्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मलाई अनुसन्धान र शिक्षित हुन मन पर्छ। सबै प्रकारका पेशाहरू र अन्य व्यक्तिहरूको जुत्तामा प्रवेश गर्न सक्षम हुनु ठूलो काम हो। ” - डेन्जेल वाशिंगटन
"मैले मदिरापान र मेरो दिमाग र शरीरलाई एकै ठाउँमा ल्याउन बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि चीजलाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रतिबद्धता गरें। र ममाथि भलाइका बाढीहरू खोलिएका छन् - आध्यात्मिक र आर्थिक रूपमा। - डेन्जेल वाशिंगटन
"मसँग वास्तवमा क्लासिक संघर्ष कहिल्यै थिएन। मलाई विश्वास थियो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मैले ओथेलो खेलेको थिएँ, तर लरेन्स ओलिभियरले यो खेल्दा कसरी गरे भन्ने सोचेर बसेको छैन। यसले मलाई कुनै फाइदा गर्दैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"म भन्छु कि भाग्य तब हुन्छ जब अवसर आउँछ र तपाईं यसको लागि तयार हुनुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मसँग अझै पनि मेरो बेरोजगारी पुस्तकहरू छन् र मलाई सम्झन्छु जब मैले सरसफाइ विभाग र हुलाक कार्यालयमा काम गरें।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मलाई लाग्छ कि एक रोल मोडेल एक सल्लाहकार हो - कसैलाई तपाईले दैनिक आधारमा देख्नुहुन्छ, र तपाईले उनीहरुबाट सिक्नुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मलाई लाग्छ कि टोटेम पोलको तल अफ्रिकी-अमेरिकी महिलाहरू वा रंगका महिलाहरू हुन्। मलाई लाग्छ कि उनीहरूले हलिउडमा कम अवसर पाउँछन्। - डेन्जेल वाशिंगटन
“म सानै छँदा मलाई चलचित्र हेर्ने अनुमति थिएन; मेरो बुबा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 101 Dalmatians र राजाहरूका राजा, त्यो यसको हद थियो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
‘म दर्शकका लागि कडा मेहनत गर्छु। यो मनोरञ्जन हो। मलाई प्रमाणीकरणको आवश्यकता छैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“म कारखानामा काम गर्छु। म एक फोहोर मान्छे थिएँ। हुलाक कार्यालयमा काम गरेँ । यो धेरै पहिलेको कुरा होइन। मलाई यो सोच्न मन पर्छ कि म एक सामान्य केटा हुँ। - डेन्जेल वाशिंगटन
"मलाई दिइएको जुनसुकै क्षमताहरू प्रयोग नगर्दा म अझ डराउँछु। ढिलाइ र आलस्यले म झन् डराउँछु। - डेन्जेल वाशिंगटन
"म फिल्मको बफ होइन। म धेरै चलचित्र हेर्दिन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"म मानिसहरूलाई विचलित गर्न डराउँदिन। तर म त्यति विचलित छैन किनकि म के विरुद्धमा छु भनेर बुझ्छु। - डेन्जेल वाशिंगटन
"म लुपमा छैन; म कुनै पनि कलाकारलाई चिन्दिन, वास्तवमा, मैले काम गर्नेहरू मात्र। - डेन्जेल वाशिंगटन
"मलाई सेलिब्रेटी बन्न रुचि छैन; मलाई राम्रो अभिनेता र राम्रो निर्देशक बन्न मन छ ।” - डेन्जेल वाशिंगटन
"म कालो हुनुमा धेरै गर्व गर्छु, तर म कालो मात्र होइन। त्यो मेरो सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, मेरो आनुवंशिक श्रृङ्खला हो, तर यो सबै म को हुँ भन्ने होइन न त त्यो आधार हो जहाँबाट मैले हरेक प्रश्नको जवाफ दिन्छु।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“मैले सधैं सुरक्षित महसुस गरेको छु। यो ईश्वरको इमानदार सत्य हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"म भाग्यमानी भएको छु। म स्क्रिप्ट छान्दिन। स्क्रिप्टले मलाई छान्छ। - डेन्जेल वाशिंगटन
"मैले मेरो जीवनभर बच्चाहरूसँग काम गरेको छु।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यदि म एक कप निर्माता हुँ, म सम्भवतः सबै भन्दा राम्रो कप बनाउन इच्छुक छु। मेरो प्रयास त्यो कपमा जान्छ, मानिसहरूले यसको बारेमा के सोच्छन् भन्ने होइन। - डेन्जेल वाशिंगटन
"यदि तपाइँ असफल हुनुहुन्न भने, तपाइँ प्रयास पनि गरिरहनु भएको छैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यदि तपाई पाइलटलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, नजानुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यदि तपाइँको शत्रु छ भने, तपाइँको शत्रुलाई जान्नुहोस् र चिन्नुहोस्, उसलाई वा उसलाई मात्र पागल नगर्नुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यदि तपाईं योद्धा बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले तालिम लिनुपर्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"कुनै पनि पेशामा यो पीस हुन सक्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"लस एन्जलसमा, सबैजना स्टार हुन्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न, तपाईंले आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुपर्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यो तपाईलाई थाहा छैन, यो तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यो सरल छ: तपाइँ एक भाग पाउनुहुन्छ। तपाईं एक भूमिका खेल्नुहोस्। तपाईं यसलाई राम्रोसँग खेल्नुहुन्छ। तिमी आफ्नो काम गर अनि घर जाउ ।” - डेन्जेल वाशिंगटन
"यो सरल छ: तपाइँ एक भाग पाउनुहुन्छ। तपाईं एक भूमिका खेल्नुहोस्। तपाईं यसलाई राम्रोसँग खेल्नुहुन्छ। तिमी आफ्नो काम गर्छौ अनि घर जान्छौ। र चलचित्रहरूको बारेमा अचम्मको कुरा यो हो कि एक पटक तिनीहरूले काम गरेपछि, तिनीहरू मानिसहरूको हो। एकचोटि तपाईंले यसलाई बनाउनु भएपछि, तिनीहरूले के देख्छन्। मेरो टाउको त्यहीँ छ ।” - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईंले धेरै काम गरिरहनु भएकोले तपाईंले धेरै काम गरिरहनुभएको छ भन्ने होइन। आन्दोलनलाई प्रगतिसँग भ्रमित नगर्नुहोस्। - डेन्जेल वाशिंगटन
"आफ्नो असफलतामा हाँस्न सिक्नुहोस्, आफ्नो जीतमा मुस्कुराउनुहोस् र आफैंमा हाँस्न नडराउनुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जीवन ज्ञान र अनुभवको एक पग्लने भाँडो हो, दुबै तपाईको र तपाईको वरपरका सबैको। अरूको गल्तीहरूबाट सिक्न नडराउनुहोस्, र उपयोगी जानकारी वा विचारहरूको बिटहरू लिनुहोस् जसले तपाईंलाई आफूले गरेको काममा अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ। बुद्धि तपाईको औंलाको छेउमा छ, यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"भाग्य त्यो हो जहाँ अवसरले तयारी पूरा गर्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मानिसले तपाईंलाई पुरस्कार दिन्छ तर भगवानले तपाईंलाई इनाम दिनुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मेरिल र क्याथरिन हेपबर्न सायद यो र पछिल्लो शताब्दीका दुई महान अभिनेत्री हुन्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"पैसाले खुशी किन्न सक्दैन। केही मानिसहरू भन्छन् कि यो डाउन पेमेन्टको हेक हो, यद्यपि।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मेरो विश्वासले मलाई परिस्थितिले मेरो खुशी, मेरो आन्तरिक शान्तिलाई निर्देशित गर्दैन भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“मेरी आमाले मलाई कहिल्यै हार मान्नुभएन। मैले स्कूलमा यति गडबड गरें कि उनीहरूले मलाई घर पठाइरहेका थिए, तर मेरी आमाले मलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउनुभयो। - डेन्जेल वाशिंगटन
‘मेरी आमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो अवार्ड मान्छेले दिन्छ, भगवानले दिन्छ । मलाई अर्को फलक चाहिँदैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"14 वर्ष पहिले रिचर्ड III मा मेरो भूमिका - त्यो पहिलो पटक थियो जब मैले खराब मान्छेको भूमिका निभाएको थिएँ र यसको बारेमा धेरै कुरा सिकेको थिए - तिनीहरू सबै रमाइलो छन्!" - डेन्जेल वाशिंगटन
"मेरो अन्तिम जीवन सपना परियोजना मेरा बच्चाहरु हो। मेरो परिवार।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाई को हुनुहुन्छ मा कहिल्यै सम्झौता नगर्नुहोस्। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने महानता प्राप्त गर्ने क्षमता लिएर जन्मनुभएको छ। होइन भन्न सिक्नु त्यो महानता पहुँच गर्न एक महत्वपूर्ण तत्व हो। तपाईंका छनौटहरूले तपाईंलाई परिभाषित गर्नेछ; त्यसैले तिनीहरूलाई सही बनाउनुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"आन्दोलनलाई प्रगतिसँग कहिल्यै भ्रमित नगर्नुहोस्। किनकि तपाईं ठाउँमा दौड्न सक्नुहुन्छ र कतै पुग्न सक्नुहुन्न। - डेन्जेल वाशिंगटन
"कहिल्यै कृतघ्न व्यक्तिलाई आफ्नो खुट्टामा उठ्न मद्दत नगर्नुहोस्। यो ब्वाँसोलाई तिमी भेडा हौ भनी भन्नु जस्तै हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जीवनमा कुनै पनि कुरा सार्थक हुँदैन जबसम्म तपाइँ जोखिम लिनु हुन्न। अगाडि झर्नुहोस्। हरेक असफल प्रयोग सफलताको एक कदम नजिक हुन्छ। - डेन्जेल वाशिंगटन
"बुढो मान्छे बुढो हुनु पर्छ, माछा माछा हुनुपर्छ। जुनसुकै भए पनि यस संसारमा तिमी जो हौ त्यही हुनुपर्छ। - डेन्जेल वाशिंगटन
"सफलताको बाटोमा, त्यहाँ सधैं अरू कसैलाई पनि सफल हुन मद्दत गर्ने अवसर हुनेछ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"एउटा असफल प्रयोग सफलताको एक कदम नजिक छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"फिल्ममा अभिनयको बारेमा एउटा राम्रो कुरा भनेको यसको राम्रो उपचार हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“तिमीले गर्ने हरेक काममा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहोस्। मसँग जे छ सबै भगवानको कृपाले हो, मैले बुझें। यो उपहार हो। म सधैं उहाँसँग टाँसिइनँ, तर उहाँ मसँग टाँसिनुभयो।” - डेन्जेल वाशिंगटन
"त्यसोभए तपाईले कसलाई छुनु हुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा छैन। तपाईलाई कहिले थाहा छैन कसरी वा कहिले तपाईको प्रभाव हुन्छ, वा तपाईको उदाहरण अरु कसैको लागि कति महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"सफलता? मलाई त्यो शब्दको अर्थ थाहा छैन। म खुसी छु। तर सफलता, त्यो फिर्ता जान्छ कसैको नजरमा सफलता भनेको के हो। मेरो लागि, सफलता आन्तरिक शान्ति हो। त्यो मेरो लागि राम्रो दिन हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"प्रतिभा भगवानबाट आउँछ। यदि तपाईलाई केहि दिइएको छ भने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, यसलाई खेती गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस् र विकास गर्नुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईंले लिने मौकाहरू, तपाईंले भेट्नुहुने मानिसहरू, तपाईंले माया गर्ने मानिसहरू, तपाईंसँग भएको विश्वास। यही नै तपाइँलाई परिभाषित गर्न गइरहेको छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“पछिल्ला केही वर्षदेखि मैले म छाड्न तयार छु भनेर भन्दै आएको छु। यो मलाई त्यति चाखलाग्दो थिएन। अब म निर्देशन गर्दैछु, यो सबै नयाँ छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईँलाई आफ्नो सपनाहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्ने एकमात्र चीज भनेको कथाहरू हुन् जुन तपाईं आफैलाई बताउनुहुन्छ कि तपाईं सक्नुहुन्न। प्रतीक्षा नगर्नुहोस् - अब कार्य गर्नुहोस्। केही पछुताउनु पर्दैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"सबैभन्दा गरीब मानिसहरू सबैभन्दा मीठा मानिसहरू हुन्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"युद्धको उद्देश्य राजनीतिक अन्त्यको सेवा गर्नु हो तर युद्धको वास्तविक प्रकृति आफैलाई सेवा गर्नु हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"उडानको बारेमा चिन्ता गर्ने समय भनेको जब तपाईं जमिनमा हुनुहुन्छ। जब तपाईं हावामा हुनुहुन्छ, धेरै ढिलो भइसकेको छ। त्यसपछि चिन्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यो संसारमा दुई प्रकारका पीडाहरू छन्। दुख्ने पीडा, पीडा जसले परिवर्तन गर्दछ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाई आफ्नो सपनाहरु को लागी काम गर्दा आफ्नो अनुभवहरु लाई प्रतिबिम्बित गर्न को लागी धेरै आनन्द पाउन सकिन्छ। आफ्नो असफलतामा हाँस्न सिक्नुहोस्, आफ्नो जीतमा मुस्कुराउनुहोस् र आफैंमा हाँस्न नडराउनुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तुलना बाहेक राम्रो वा नराम्रो केहि छैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“भेडाको रक्षा गर्न, तपाईंले ब्वाँसोलाई समात्नु पर्छ। र ब्वाँसो समात्न ब्वाँसो चाहिन्छ, बुझ्यौ ?” - डेन्जेल वाशिंगटन
"कुनै पनि राम्रोको लागि हृदयमा साँचो इच्छा भनेको तपाईलाई पहिले नै पठाइएको प्रमाण हो कि यो पहिले नै तपाइँको हो भनेर संकेत गर्दछ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"आफैलाई विश्वास गर्नुहोस् र आफ्नो छनौटहरूमा विश्वास गर्नुहोस्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"हामी जे गर्न चाहन्छौं त्यही गर्छौं ताकि हामी जे चाहन्छौं त्यो गर्न सक्छौं।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"हामी सबैले राम्रो भाग्यको आफ्नो अंश पाएका छौं, त्यसैले मेरो परिभाषा धेरै हो। एउटै आशीर्वाद संसारमा सबै इनाम हो, र यदि तपाईलाई आशिष् दिइएको छ भने तपाईले त्यसमध्ये केही पार गर्नको लागि हो। तपाईं एक सकारात्मक उदाहरण सेट गर्न को लागी हो। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तिमी अतिरिक्त के गर्दै छौ? त्यो के गणना छ। त्यो हो जब तपाईं कडा परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ - जब तपाईं माथि जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईंबाट अपेक्षा गरिएको छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"यसले मलाई के सिकायो माफी थियो। यसले मलाई सिकायो कि जब मानिसहरूले आफूलाई एक निश्चित तरिकामा प्रस्तुत गर्छन्, त्यहाँ सायद केही पछाडिको कथा वा मुद्दा वा कारण हुन सक्छ। यो तपाईं होइन। यो तिनीहरू हो। र धेरै पटक, यो त्यस्तो चीजको बारेमा हो जुन पूर्णतया उनीहरूको नियन्त्रण बाहिर छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जब मैले एक सिपाहीको कथा गरें, म धेरै जवान र हरियो थिएँ र मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने लाग्यो-अब मलाई थाहा छ मलाई सबै कुरा थाहा छ!" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जब म सानो थिएँ, मलाई लाग्यो कि मैले एक परी देखेको छु। यसमा पखेटा थियो र मेरो बहिनी जस्तै देखिन्थ्यो। मैले ढोका खोलें ताकि कोठामा केही प्रकाश आउन सकोस्, र यो एक किसिमको हरायो। मेरी आमाले भनिन् यो सायद मेरो गार्जियन एन्जिल हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“जब मानिसहरू विरोध गर्छन् र फिल्म देखेर निराश हुन्छन्, त्यो ठूलो हिट हुन्छ। उनीहरूले Passion of The Christ लाई घृणा गरे, यसले बक्स अफिसको लागि राम्रो काम गर्यो। त्यसोभए यसलाई जारी राखौं। ” - डेन्जेल वाशिंगटन
"जब तपाई राम्रो गर्नुहुन्छ, तपाईले राम्रो पाउनुहुन्छ! तृप्ति अरूको सेवाबाट आउँछ, केवल आफ्नो सेवा गर्न हतार गर्दैन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जब तपाई राम्रो गर्नुहुन्छ, तपाईले राम्रो पाउनुहुन्छ! तृप्ति अरूको सेवाबाट आउँछ, केवल आफ्नो सेवा गर्न हतार गर्दैन। सफलताको बाटोमा, त्यहाँ सधैं अरू कसैलाई पनि सफल हुन मद्दत गर्ने अवसर हुनेछ। त्यो अवसर लिनुहोस्, र अरूको जीवनमा फरक पार्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। - डेन्जेल वाशिंगटन
"जब तपाइँ केहि बुझ्नुहुन्न, तपाइँ यसलाई लेबल र निन्दा गर्नुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"जहाँ मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा धेरै काम क्यामेराको पछाडि छ, यसको अगाडि होइन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
“हामी प्रार्थना गर्दा, रुँदा, चुम्बन गर्दा वा सपना देख्दा किन आँखा बन्द गर्छौं? किनभने जीवनमा सबैभन्दा सुन्दर चीजहरू देख्दैनन् तर हृदयले महसुस गरिन्छ। - डेन्जेल वाशिंगटन
"लेखन एउटा हतियार हो र यो मुट्ठी भन्दा धेरै शक्तिशाली हुन सक्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तिमीले मलाई कुट्न वा जेल हाल्न वा मार्न पनि सक्छौ, तर म जस्तो बन्न चाहन्छु, त्यो बन्ने छैन!" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तिमीले मलाई तोड्न सक्दैनौ किनकि तपाईले मलाई बनाउनु भएन।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईलाई कहिले हेरिएको छ थाहा छैन। त्यो सेलिब्रेटीको बारेमा अनौठो चीजहरू मध्ये एक हो। यो अभिनय, सेलिब्रेटीको मेरो सबैभन्दा कम मनपर्ने भाग हो। - डेन्जेल वाशिंगटन
"तिनीहरू हुँदा तपाईंले क्षणहरू समात्नु पर्छ। मलाई इम्प्रोभाइज र एड लिब मन पर्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईलाई थाहा छैन कि तपाइँ कसरी मानिसहरूलाई असर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तपाईं लामो समयसम्म कुनै पनि कुराको अभ्यास गर्नुहुन्छ, तपाईं त्यसमा राम्रो गर्नुहुन्छ। तपाईं दिनमा सय झुट बोल्नुहुन्छ, यो सत्य जस्तो लाग्छ। सबैले सबैलाई धोका दिन्छन्।" - डेन्जेल वाशिंगटन
"तिमी वर्षाको लागि प्रार्थना गर्छौ, तपाईले हिलोसँग पनि सामना गर्नुपर्छ। त्यो यसको एउटा अंश हो।" - डेन्जेल वाशिंगटन